Amathiphu wokuhambisa izinwele ngokwemvelo | Amadoda aSitayela
I-Los izidakamizwa zemvelo zingasebenza futhi zibe nempilo. Amanye amathiphu afana nalawa esiwaphakamisa namuhla ayawavumela thambisa izinwele, ngaphandle kokuphendukela kwimikhiqizo yokufakelwa, eyenziwe ngezithako esingazi nokwazi.
El Aguacate Kuyisithelo esinezinto eziningi, kufaka phakathi ukufuthisa izinwele ngokwemvelo. Izifihla-buso ezenzelwe ukwatapheya zisiza ekwenzeni izinwele zithambe. Kufanele uhlanganise isikhuphasha seqanda, isipuni samafutha, noginindela we-avocado. Ingxube isetshenziswa ezinweleni, bese isala isebenza imizuzu engama-30. Ngemuva kwalokho ihlanzwa ngamanzi abandayo.
Isithako esidume kakhulu ekudleni kwaseMedithera, i- amafutha e-oliveKubuye kube ngumlingani ophelele wokuhambisa izinwele. Ukulungisa le maski, isipuni sesithako ngasinye kulezi ezilandelayo kufanele sishiswe esitsheni: uwoyela womnqumo, uwoyela we-sunflower, Aguacate, amafutha e-alimondi. Konke kuhlangana kahle kuze kuqale ukubumba umusi omncane. Kuyasuswa emlilweni bese kulindwa kuphole. I- imaski ezinweleni, ukwenza ukubhucungwa komzimba, bese kuyivumela ukuthi isebenze imizuzu engu-15, ngopende wepulasitiki ekhanda. Ngemuva kwale mizuzu eyishumi nanhlanu, izinwele zigezwa nge-shampoo ejwayelekile.
Futhi ukufakela izinwele ukuze uzicacise, i- ukondla kungesinye isici esibaluleke kakhulu okufanele usicabangele. Kungakho kunconywa ukuthi ulandele ukudla okulinganiselayo nokuhlukahlukene, okunothile izakhamzimba, amavithamini namaminerali, kepha akufanele ukhohlwe ukuphuza uketshezi oluningi ukufakela umzimba umzimba ngaphakathi.
Nabalandeli be- inkinobho yomcibisholo wokuphenya, ayikho into engcono ukwedlula imaski yokuhambisa izinwele ngamanzi ngokususelwa kulesi sithako. Ukulungiswa kwayo kulula, ngoba kwanele ukushisa isitsha ngesipuni se uwoyela wesoya kanye namafutha amabili we-castor. Lapho ingxube ibanda, isetshenziswa ezinweleni nge-massage. Izinwele zisongwe ngethawula bese zilinda imizuzu eyi-2. Ukuqeda, ugeza izinwele zakhe nge shampoo okuvamile.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Ezempilo » Amathiphu wokuhambisa izinwele ngokwemvelo
Amabhantshi aphansi kakhulu kule sizini yasebusika